दशैं धमाका:पल्सर १२५ को बिक्री सुरु मासिक ६ हजार रुपैयाँ किस्तामा |
October 5, 2021 adminLeaveaComment on दशैं धमाका:पल्सर १२५ को बिक्री सुरु मासिक ६ हजार रुपैयाँ किस्तामा
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले केही समय अगाडि पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो पल्सर १२५ को बिक्री सुरु गरेको थियो । यसलाई ग्राहकले मासिक ६ हजार २५५ रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरि खरिद गर्न सक्ने छन् ।हालै मात्र कम्पनीले ल्याएको नयाँ योजनामा यो मोटरसाइकल ग्राहकले विभिन्न तीन स्कीममा खरिद गर्न सकिने छ । कम्पनीले नगद छुट, शून्य प्रतिशत व्याज तथा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट जस्ता स्कीम रहेको छ ।
यो पनि:पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा फेरी सं’ क्रमित बढ्न थालेका छन् । काठमाडौको अस्पतालहरुका वेड सं’ क्रमितले भरिन थालेका छन् ।एक सातादेखि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका बेड कोरोना सं’ क्रमितले भरिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। टेकु स्थित अस्पतालमा संक्रमितका लागि ४० वेड छुट्याइएको छ ।
ति सबै वेड सं’ क्रमितले भरिएका छन् ।आउँदो असोज १ गतेदेखि पुन नि’ षेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
खुशीको खबर:कोरोनाले पुरै विश्व थला परेको बेला नेपालमै भयो एस्तो चमत्कार,डाक्टर समेत चकित!
आफ्नो बयान फेरे पक्राउ परेका दिनेशले! प्रहरीले पनि दियो आफ्नो स्पष्टीकरण